> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos / Videos ka HTC dareen
Waxaan u baahan inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka HTC dareen!
Waxaan leeyahay telefoonka ah HTC smart leh android (dareen HTC). waa halkaas app kasta oo ka shaqeeya sidii uu bin recycle ama qashinka aan dib ugu heli doonaa sawiradii tirtiray?
Haa, waxaa jira barnaamijyo in kaban karto sawiro tirtiray taleefanada HTC dareen. Marka files lumo ama la tirtiray ka telefoonada gacanta, ma qashinka ama recycle bin waxaa la siiyaa in uu kaydiyo faylasha kuwa. Waxaad aan iyaga dib ugu soo laabtay labada meelaha sida ku computer ka heli kartaa. The files tirtiray waxaa lagu calaamadeeyay sidii aan waxtar lahayn iyo kaydinta ay ka soo qaadeen waxa lagu calaamadiyaa sida maran u qori. Sidaas darteed haddii aadan sawiro cusub ama videos qaadan duudduuban oo camera ah, waxaad soo kabsado tirtiri karaa ama sawiro iyo filimo ka phone HTC dareen laga badiyay fudayd.
Waxaad u baahan tahay qalab lagu kalsoonaan karo HTC dareen software soo kabashada. Halkan waa talo: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac , taas oo labada ogolaado in aad dib u soo ceshano photos, audio iyo video files in lagu tirtiro, formatted ama laga badiyay sababo kale ka HTC dareen Xl, Xe, 4G, iwm Waxaa intaa dheer in telefoonada HTC, software this sidoo kale taageertaa soo kabashada xogta laga telefoonada mobile kale, drives adag dibadda, ciyaartoyda music, drives USB, iPod, kombiyuutarada shakhsi, iwm
Download version maxkamad bilaash ah software ka soo kabashada sawir HTC dareen hadda hoos ku qoran.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) inuu ka soo kabsado sawiro iyo video ka card SD gudaha HTC dareen. Connect qalab si aad u computer iyo si toos ah u iskaan for photos iyo video lumay ee HTC dareen.
Kabsado photos tirtiray & videos ka HTC dareen in 3 Talaabooyinka
Next, aynu bilaabi kabashada HTC dareen ah in Windows la Wondershare Photo Recovery, inuu ka soo kabsado photos lumay, video iyo music talaabo talaabo ah.
Step1. Connect phone HTC dareen in kombiyuutarka
First of dhan, xirmaan phone HTC dareen in kombiyuutarka, iyo in la hubiyo waxa la ogaan kombiyuutarka. Burcad barnaamijka oo guji "Start" si ay u bilaabaan aad soo kabashada phone dareen HTC.
Step2. Dooro HTC phone dareen oo ay bilaabaan iskaanka
Dooro HTC phone dareen liiska qalabka iyo iskaanka bilowdo sawirada tirtiray, videos iyo files audio. Waxa kale oo aad kala miiri kartaa raadinaya qaab nooca file ama file aad raadineyso weeyna adigoo gujinaya "Filter Options" ee.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh xogta HTC dareen iyo kabsado iyaga fudayd
Marka gool scan ah, dhammaan faylasha helo waa la soo bandhigi doonaa qaabab file. Ka hor inta soo kabashada, aad enpowered in ay ku eegaan file ka heleen. Dooro faylasha aad rabto inaad ka soo kabsadaan ka dibna riix "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad HTC phone dareen. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada sawir HTC dareen
Hagaha Mirror Your Android inay Android
Sida loo sameeyo ee kaabta WiFi on Android Phone iyo Tablet Si fudud
Sida loo Beddelaan RA in MP3 u Google Music